6 टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेट China Manufacturer
विवरण:मेकअप ब्रश सेट,मेकअप ब्रश,मेकअप ब्रश सेट बेस्ट
Home > उत्पादनहरू > ब्रश सेट > 6pcs ब्रश सेट >6टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेट
6 टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेट
मोडेल संख्या: YC027
प्याकेजिङ: कार्टून बक्सको साथ ओप थैला, अनुकूलित प्याकिङ नकारात्मक हुन सक्छ
ढुवानी: Ocean,Air,By Express
आपूर्ति क्षमता: 200000set/months
एच एस कोड: 9603290090
एक6टुक्रा व्यावसायिक ब्रश सेट2ठूलो आधार श्रृङ्गार ब्रश र4सानो पर्दाफाल ब्रश।6टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेट सिंथेटिक हेयर प्रयोग गरिरहेको छ।
सिंथेटिक ब्रश 100% vegan र संवेदनशील छाला को लागि hypoallergenic हो। घनी प्याकेड, अल्ट्रा मुलायम, उच्च गुणस्तरको सिंथेटिक बाल पाउडरहरू र तरल पदार्थहरूको गैर-एडोप्टिकेट हुन्, यसैले आधारभूत रकमको मात्रा कम गर्न वा काम पूरा गर्न आवश्यक छ।
यो एक राम्रो, निर्दोष मेकअप खत्म प्राप्त गर्न को लागि प्रयोग को लागि सबै भन्दा राम्रो आधार ब्रश र अवधारणा ब्रश हो। सिंथेटिक ब्रश अनुहार को लागी आवेदन पाउडर, क्रीम र तरल फार्म को लागि डिज़ाइन गरिएको छ। यो कस्मेटिक ब्रश किटले आधारको लागि ब्रशको वर्गीकरण गरेको छ र अवधारणालाई उत्तम, प्रिस्टिन प्याकेज प्राप्त गर्न।
यो6टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेटले6निम्न ब्रश समावेश गर्दछ:
एक गुप्त, लामो-ह्यान्डल, सिंथेटिक पाउडर ब्रश। तरल र क्रीम नींवहरू लागू गर्दछ, साथसाथै खुसी र दबाएको खनिज पाउडरहरू अनुहारमा। गुंबद ब्रश हेडले लामो सिंथेटिक बालहरू सरासर, प्राकृतिक, हावा ब्रान्ड लगाउने सिर्जना गर्दछ। यदि वांछित भएमा, बढ्दो तह तहहरू आवश्यक आधार कवरेज प्राप्त गर्न निर्माण गर्नुहोस्।
हाम्रो Angled ब्रश विशेष रूप देखि परिभाषित आकृति बनाउन को लागि डिजाइन को लागि एक फ्लैट, विस्तृत हेड को विशेषता हो।
ओवल रिफाइनर ब्रश:
एउटा सानो, ओवल, लामो-ह्यान्डल, ओवल रिभाइन ब्रश। ओवल-आकारको ब्रशसँग एक चप्पल माथि र गोल किनारहरू छन्। अनुहारको गोल गरिएका क्षेत्रहरूमा अवधारणा लागू गर्नका लागी डिजाइन गरिएको, जस्तै आँखा वरपरका क्षेत्रहरू, नाक र चिनका पक्षहरू। यो ओवल रिफाइनर ब्रश पनि अन्य अनुहार ब्रशबाट बाहिरी कठोर रेखाहरू मिश्रण गर्न, को लागी उपयोगी छ, नाकको माथि हाइकिङ, चीकेबोन र कपिडको धनुषा क्षेत्रमा।
गोल रेफ्रिज ब्रश:
सानो, गोलो, लामो-ह्यान्डल, सिंथेटिक ब्रश। गुप्त ब्रश भान्साहरू र ब्ल्याक सर्कलहरू, हजुरआमा, लाडो र अन्य छाला असिमेन्टहरू मेटाउन छालामा लुगा लगाउँछन्। सागर ब्रश पनि ठीक देखि हाइलाइट गर्न र नाक, चीकेबोन र जबड़े लाइन क्षेत्रहरू छाया गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आँखा ब्रो ब्रश:
एक सानो, फ्लैट एङ्गले, लामो ह्यान्डल, सिंथेटिक ब्रश। टाढाको कोमल ब्रश आँखाका सबै क्षेत्रमा फिट हुन्छ। विशेष रूपमा सिद्ध जब आँखाको सर्कलहरूमा लुकाउन र दाँतमा लुकाउन, लाडो र अन्य छालाका अशुद्धताहरू लुकाउन प्रयोग गर्भधारणका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो फ्ल्याट कोणित ब्रश पनि ठीक छ नाक र चीकबोन को परिभाषित गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्रिसमा सहज मिश्रणको लागि सफ्ट, ओभररेड डिजाइन
प्रत्येक महिना ब्रश सफा गर्नुहोस्।
1. प्रति महिना एकपटक सफा गर्नुहोस्।
2. हरेक दुई महिना कम्तिमा एक गहिरो सफाई
3. तपाईंले ब्रश हरेक दिन प्रयोग गरे छिटो सफा गर्नुहोस्।
कसरी ब्रश सफा गर्ने?
1। ब्रश टाउकोमा न्यानो साबुन पानी धोएर पानीमा राख्नुहोस्।
2। प्राकृतिक कपाल संग बनाइएको ब्रश को लागि, तपाईं एक तटस्थ शैम्पू को उपयोग गर्न को लागि साफ गर्न सक्छन्। (तपाईंको हात को खजूर मा केहि शैम्पू ले लो, तब ब्रश को नमस्कार, घडी को घडी को दिशा मा धीरे देखि घुमाएर उंगली को उपयोग गर्नुहोस यो धोएर र ऊतक प्रयोग गर्नुहोस् यो सानो। सुत्न ध्यान दिनुहोस्। पीएलसीलाई ध्यान दिनुहोस्, यसलाई निचोड्नुहोस्, ब्रश फ्ल्याक नभएसम्म यो पूर्णतया सुत्न सक्नु हुन्छ। यसलाई नराम्रासँग टाढा राख्नुहोस्, अन्यथा यसले यसलाई विरूपित बनाउनेछ।
उत्पादन कोटीहरू : ब्रश सेट > 6pcs ब्रश सेट
6 टुक्रा उत्तम सिंथेटिक मेकअप ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
6 औंठी लाल रंग मेकअप को लागि सर्वश्रेष्ठ ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
6 पीसीसी मिनी पोर्टेबल यात्रा मेकअप ब्रश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
बैंगनी रंग मेकअप ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
6PCS व्यावसायिक eyebrow मेकअप ब्रश सेट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
मेकअप ब्रश सेट मेकअप ब्रश मेकअप ब्रश सेट बेस्ट